Ukuthintela ukuKhanya kubo bonke abakhangeli
USteve Jobs wayenjalo kunene. Umntu wokuqala owandicebisayo ukuba ndifumane iFlash blocker yayinguBlake Matheny. UBlake yenye yezona njineli zibalaseleyo endakha ndonwabela ukusebenza nazo-kwaye ndisebenze naye bobabini Isihlomelo kwaye ChaCha. Ungacinga ukuba ngendimamele umfana oguqula lonke iziseko kunye neqonga ubuncinci iinkampani ezimbini zobuchwephesha.
Khange ndimmamele. Ndivele ndaqhubeka nokuhamba ecaleni… ndisebenzisa iChannel kunye neFirefox kwaye ndibukele amaphepha engumkhenkce, itafile, okanye nditshixela ilaptop okwethutyana. Ngamanye amaxesha, kuye kwafuneka ndibulale iibrawuza.
Kule veki iphelileyo, bendinentlanganiso entle noMichael Cloran Idolophu yonjiniyela. UMichael uqokelele okona kulungileyo kwitalente yonjiniyela ngokuqalisa kwakhe umsebenzi wophuhliso… kwaye uqikelele ntoni? Bonke basebenzisa i-flash blocker. Undixelele ukuba usandula ukuqala ukusebenzisa enye kwaye bekumangalisa ukuba zikhutshwa ngokukhawuleza kangakanani iisayithi kwaye zimbalwa kangakanani iingxaki anazo.
Ke, ngolwesibini ndigqibe kwelokuba ndizame. Ndilayishe i-flash blocker ye-Chrome. Ndisezulwini iveki yonke. Yonke into ilayisha ngokukhawuleza, akukho nto iba ngumkhenkce, kwaye andiphosi mava eFlash kwaphela. Ixesha nexesha, ndifuna iFlash ukuze ibhlokhi indivumele ukuba ndicofe ngokulula kwicandelo leFlash kwaye ilayishe phezulu. Ukongeza, ndingacofa ekunene (umz.YouTube) kwaye ukhethe ukuhlala uvumela iFlash ukuba ilayishe kwisiza.
Ukuba usebenzisa esinye isikhangeli, unokukhetha:
chrome - I-FlashBlock
Firefox - I-Flashblock Faka kwi.
safari - Cofa kwiFlash.
Opera - I-Flashblock.
IE 7 - I-Ad blocker ineFlash block.
IE 8 -Kunokuguqulwa kokuvula indawo nganye ebhloka kwiFlash.
Uya kumangaliswa kukuba zingaphi iisayithi ezisebenzisa iFlash. Ndinoluvo lokuba abanye babanini beziza abaziqondi. Amaxesha ngamaxesha, ndiyilayisha le bhlog kwaye khange ndiqonde ukuba iintengiso ezi-3 zaziza ngeFlash. Akukho nto Zibengezela malunga nabo… kodwa bakhona!
Nanku umzekelo ocacileyo, ifayile ye- Ukwazisa uCastor indawo ngaphandle kunye neFlash. Ukuhlala ngaphezulu kwefleshi kuyayikhanyisa kwaye ucofe kuyo iqhuba imodyuli yeFlash.
Njengoko i-HTML 5 iba yinyani, iAdobe ifuna ukuyifumana kodwa kwigiya yokuyila kwakhona iFlash ukusuka emhlabeni ukuya phezulu. Andikuthandi ukuvumelana noSteve Jobs, kodwa kule meko uswelekile. Ngokuphathelele kwiinkampani ezibeka ikamva labo kwiFlash, unokufuna ukufumana isicwangciso sokubuyisela. Ukuba awubonanga i-HTML 5, iApple inayo umboniso omkhulu… Nangona ifuna ukuba usebenzise iSafari ukuyijonga.
tags: i-block blockeradobe flashisilumkiso castorblake mathenychachacofa iqhoshaisihlanganisiflashoonotsheluzaukuvimba indawo nganye kwindawo nganyeimisebenzi ye-steve
Ividiyo kuyilo ngokuchasene nokuSebenza